FBC - Gareen Qulqulleeffataa Hoggantoota Olaanoo Raayyaa Ittisaa haammate gara Moyyaalee qajeeluunsaa ibsame
Gareen Qulqulleeffataa Hoggantoota Olaanoo Raayyaa Ittisaa haammate gara Moyyaalee qajeeluunsaa ibsame
Finfinnee, Bitootessa 2, 2010 (FBC) Gareen Qulqulleeffataa hoggantoota olaanoo Raayyaa Ittisaa haammate miidhaa Moyyaaleetti lammilee nagaa irratti qaqqabe qulqulleeffachuuf garas qajeeluunsaa ibsame.
Garichi maatii miidhamtootaa fi haawaasa haasofsiisuun akka jajjabeessuu fi hojii tasgabbeessuu akka hojjatu Bakka-bu’aan Sakreetariyaatii Komaand Poostichaa Leetanaal Janaraal Hasan Ibraahim himaniiru.
Miidhaa qaqqabeenis Komaand Poostichi gadda itti-dhaga’ame akka ibsu Leetanaal Jeneraalli kun himaniiru.
Haalli biyyattiitti uummame akka ittumaa hammaatu kan kaayyeffate humni ABO kallattii sadiin gara biyyattii cabsee seenuuf sochii taasise too’achuuf gara Moyyaalee kan imale waraanni kumaalaa tokko odeeffannoo dogoggoraa qabachuun walitti-bu’iinsa uumameen haala raawwii dirqamaa hin-hordofneen tarkaanfii fudhachuusaan lubbuu namaa irratti miidhaan qaqqabuu isaati kan ibse.
Miseensota raayyaa ittisaa gocha kana irratti hirmaatan tarkaanfiin jalqabaa hidhata hiikkachiisuu fi too’annoo jala oolchuu irratti fudhatamuusaa kan himan Leetanaal Janaraalli kun, hojiin qulqulleeffachuu fi qorannoo akka xumurameenis mana-murtii waraanaatti akka dhihaatan ibsaniiru.
Fuul-durattis hoggantoonni iddo iddoo jiran ‘Danbii’ Raawwii Dirqamaa sirriitti akka raawwachiisan hubachiisaniiru.
Hawaasichis qaamolee nageenyaa Qajeelfama Komaand Poostii Labsii Yeroo Ariifachiisaa raawwachiisuuf socho’an waliin nagaa isaa eegsisuuf hojjachuu akka qabu waamicha dabarsuusaanii Tajaajilli Oduu Itiyoophiyaa EBC eeree gabaaseera.
Komaand Poostichi akka beeksisetti Naannoo Oromiyaa Moyyaaleetti miseensonni raayyaa ittisaa shan odeeffannoo dogoggoraa qabatanii sochii raawwataniin lubbuun namoota sagalii wayita darbu , kaan 12 irra ammoo miidhaan madaa’uu qaqqabeera.
Oduuwwan Biroo « Komaand Poostiin Moyyaaleetti odeeffannoo dogoggoraan lubbuun namoota sagalii darbuusaa ibse	Lammiilee buqqa'an hojii qabsiisuu fi qubachiisun hojjetamaa jira »